KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
ASƐM A ƐDA SO | BIBLE SO WƆ MFASOƆ NNƐ?
Ɛntwaam, Ɛbɛtumi Aboa Obiara—Ahosodie
BIBLE MU ASƐM: “Ɔkwasea yi n’abufuo nyinaa adi, na onyansafoɔ dwodwo ne deɛ kɔsi aseɛ.”—Mmebusɛm 29:11.
“Ɛyɛ me sɛ nea mawu anyane!”
ƐSO MFASOƆ: Sɛ yɛka sɛ yɛntwerɛ mfasoɔ a yɛnya firi ahosodie mu a, yɛrenya ho nwoma mpo na yɛatwerɛ mu! Anyɛ yie koraa no, ahosodie ma yɛnya akwahosan pa. Bible ka sɛ: “Akoma a ɛdwoɔ yɛ honam nkwa,” na “anigyeɛ akoma sa yareɛ.” (Mmebusɛm 14:30; 17:22) Nhwehwɛmu kyerɛ sɛ, sɛ obi bo taa fu a, na ɔde ne nkwa reto asiane mu, efisɛ nnipa a wɔte saa taa nya akomayareɛ. Nanso nokwasɛm ne sɛ ɛnyɛ yɛn akwahosan nko ara nti na ɛsɛ sɛ yɛdi yɛn ho so.
Cassius adi mfie 30 ne kakra. Ɔkaa sɛ: “Na me koko ha me paa; ɛreyɛ ara ni na me ne obi de ntɔkwa agyina mu. Enti obuo paa deɛ, na menni bi. Nanso berɛ a mefirii aseɛ suaa Bible no, nneɛma sesaa koraa. Mebɔɔ mmɔden sɛ mɛhyɛ me ho so na mede afoforɔ mfomsoɔ akyɛ wɔn. Ná wei nyinaa gye ahobrɛaseɛ. Sɛ amma saa a, ebia anka saa berɛ yi meda afiase. Sɛ medwene ho a, ɛyɛ me sɛ nea mawu anyane!”
Cassius bɔɔ mmɔden sɛ ɔbɛhyɛ ne ho so na ɔde bɔne akyɛ
Abrabɔ Gyinapɛn a Mfaso wɔ So Ankasa
Nea nkurɔfo taa ka ne, ‘Yɛ nea wo ho bɛtɔ wo, ɛnyɛ nea ɔmanfo bɛka.’ So adwene a ɛte saa teɛ? Hwɛ sɛnea Bible no ma yenya abrabɔ gyinapɛn a wubetumi de wo ho ato so.